:: My Little World ::: June 2008
ငယ်ငယ်လေးထဲက ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးနေတဲ့ ဒီနာမည်... ဒီမြို့ လေး အကြောင်း ရေးစပ်ထားတဲ့ ကဗျာ၊ အမှန်တရားတွေနဲ့မှတ်တမ်းဝင်မယ့် ဒီကဗျာ.. ဧရာဝတီ မှာ တွေ့ လို မှတ်ထားလိုက်မိတယ်..
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇွန်လထုတ် ချယ်ရီမဂ္ဂဇင်း
Source : ဒီပဲယင်း ကဗျာကြောင့် ချယ်ရီ အယ်ဒီတာ နုတ်ထွက်ရ
Posted by Nay Nay Naing at 6/30/2008 10:37:00 PM3comments
Generation Y, people born between 1980 and 2008.
Click Here.. to learn new thing..
Posted by Nay Nay Naing at 6/30/2008 03:39:00 PM4comments
Posted by Nay Nay Naing at 6/29/2008 02:38:00 AM0comments
ခုရက်ပိုင်း စိတ်ဖိစီးမှု့ တွေ အရမ်းများနေတယ်။ စိတ်ရော၊ လူရော ပင်ပန်းနေ သလိုပဲ။ ဒီနေ့အချိန်လေး နည်းနည်းရတုန်း စိတ်သက်သာရာ သက်သာကြောင်း လက်အငြိမ်မနေပဲ Google ကြည့်ရင်း နဲ့ဒီ ကဗျာကို ဖတ်ဖြစ်သွားတယ်...
The moment you are inTENSION
(Then your blood pressure may rise. CAUTION)
You will never come, again, into TENSION !!!!!!!!!!
ဖတ်ပြီး သဘောကျသွားတာနဲ့ဘယ်သူရေးလဲ သိချင်လို့လိုက်ရှာကြည့်တော့ နေရာအတော်များများမှာ ခေါင်းစဉ် အမျိုးမျိုး၊ version အမျိုးမျိုးကို ရေးသူ အမည်မသိ လို့ဖော်ပြထားကြပေမယ့် ဒီနေရာမှာ တောီ့ကဗျာကို ရေးသားတဲ့သူဟာ Geshe Thupten Pelgye လို့ရေးထားတာတွေ့ ရတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 6/26/2008 07:08:00 PM2comments
လျှောက်ကြည့်ရင်းတွေ့ တဲ့ ပုံလေးတွေ။ အပြင်မှာဆို ရန်ကုန်မှာ မိုးတွင်းရောက်တိုင်း စည်းရိုးနံရံတွေပေါ်မှာ အမြဲလိုလို တွေ့ ရတတ်တဲ့ ခရုတွေကို အတော်လေး မကြိုက်ခဲ့ပေမယ့် ဒီထဲက ခရုလေးကိုတော့ ပုံလေးတွေ ကြည့်ပြီး သဘောကျသွားတယ်။ ပုံတွေကြည့်၊ စာသားတွေ ဖတ်ပြီး ငယ်ငယ်တုန်းက သင်ခဲ့ရတဲ့ "မပုကြွယ်နှင့် ခရုငယ်" ကို သတိရသွားတယ်။
Always remember, Nothing is impossible, if your heart is willing.
Labels: Cute, Quotation
Posted by Nay Nay Naing at 6/24/2008 12:12:00 PM4comments
အလုပ်မှာ လဆန်းပိုင်းထဲက စပြီး နေ့ စဉ် ရက်ဆက် အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့တယ်။
Special Promotion Product တစ်ခု Launch လုပ်တာ ရှိနေလို့အလုပ် ရှုပ်နေခဲ့တာပါ။ အဲဒီ Product က ကိုယ်တွေ အနေနဲ့ကြည့်တာတော့ ဘာမှ ဒီလောက်ကြီး ကွာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်လို ဘယ့်နှယ့်ကြောင့် အရောင်း အရမ်း တက်သွားရသလဲ မသိဘူး။ ကိုယ်နားမလည်တဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေများ ရဖို့ ရှိနေလို့ လား။ ရောင်းတဲ့သူတွေပဲ အပြောကောင်းလို့ လား။ Limited Product ဆိုလို့အ၀ယ်များတာလားတော့ မသိပါဘူး။ ၀ယ်သူ အရမ်းများလွန်းလို့လဆန်းကနေ ဒီလ ကုန်အထိ ရောင်းမယ် ကြော်ငြာ ထားခဲ့ပေမယ့် ၁ ပတ်စောပြီး အရောင်းပိတ် လိုက်တယ်။ ဒီနေ့မနက် ၁၁ နာရီမှာ နောက်ဆုံး။ ဒီနေ့မနက်ပိုင်းက စလို့Online System ကို currently under maintenance ဆိုပြီး ပိတ်ထားတယ်။ Mobile Offline က နေပြီးပဲ Submit လုပ်ခွင့်ပေးထားတယ်။ ဒါတောင် Traffic က အရမ်းများ နေတုန်းပဲ။ ဒီနိုင်ငံက လူတွေ ၀င်ငွေကောင်းပြီး ဘာလုပ်ရမယ် မှန်းမသိ၊ ပိုက်ဆံတွေ အတော်လေး ပိုနေကြတယ် ထင်ပါတယ်။ အခု Product ကို ဒီနေ့မနက်ပိုင်း အရောင်းပိတ် လိုက်ပေမယ့် လက်ကျန်တွေ submit လုပ်ခွင့်ကို လာမယ့် Sunday အထိ ခွင့်ပြုလိုက်တယ် ဆိုတော့ ဒီတစ်ပတ် အလုပ်နည်းနည်း ဆက်ရှုပ်အုံးမယ် ထင်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အရင်ရက်တွေလိုတော့ အလုပ်ရှုပ်တော့ဘူး မျှော်လင့်ရတာပဲ။
ဒီနေ့အလုပ်အရမ်း မရှုပ်တာ ကံကောင်းတယ်။ အခု လန်းလန်းဆန်းဆန်း မရှိဘူး။ လန်းဆန်းနေဖို့ လဲ အကြောင်း မရှိဘူးလေ။ မနေ့ညက တစ်ညလုံး နီးပါး မအိပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ မိုးလင်းခါနီးမှ ခဏ အိပ်ပျော်သွားတယ်။ ဒီနေ့အလုပ်ကို ၈ နာရီ ၃၀ အရောက်လာဖို့မှာထားတာ မရောက်ဘူး။ ၉ နာရီထိုးခါနီးမှ ရောက်တယ်။ ကိုယ်ရောက်တဲ့ အချိန်မှာ တခြားသူတွေ အကုန်နီးပါး ရောက်နေပြီ။ လူက ဘယ်လိုပုံပေါက်နေလဲ မသိဘူး၊ နောက်ကျပြီးလာတာတောင် PM က ဘာမှမပြောပဲ Computer ဖွင့်နေတဲ့ ကိုယ့်နားလာပြီး နေကောင်းပြီလား၊ အဆင်ပြေရဲ့လား၊ ဒီတစ်ပတ် အရမ်းအလုပ်ရှုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး လာပြောတယ်။ နေလို့သိပ်မကောင်းဘူး၊ ဒါပေမယ့် ကိစ္စမရှိပါဘူး ပဲပြန်ပြောလိုက်တယ်။ တကယ်ဆို PM အနားလာရပ်တော့ လန့် သွားတာပဲ။ တစ်ခုခု အပစ်တင်စကား ပြောတော့မယ် ထင်တာ။ ပြောရင်လဲ ခံရတော့မှာလေ၊ ကိုယ်က မနက်စောစော လုပ်စရာ ရှိရဲ့နဲ့နောက်ကျတာကို။ တစ်ခုခုဆို သူများပြောတာ မခံချင်လို့ ၊ ကိုယ့်တာဝန်ကျေအောင်တော့ အမြဲ ကြိုးစားလုပ်တယ်၊။ ကိုယ့်တာဝန်ကျေရဲ့နဲ့မတရားသဖြင့် အပစ်တင်စကားလာပြောရင် ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ရင် ပြန်ပြောမိတာ များတယ်။ အရင်ကဆို ကိုယ်ကမှန် တာသေချာနေတောင်မှ ငြိမ်ခံနေတတ်တယ်၊ နောက်ပိုင်းမှာ ပထမဆုံး လုပ်တဲ့ အလုပ်မှာ အတူတူလုပ်တဲ့ သူငယ်ချင်း မြှောက်ပေးတာက အစပြုပြီး ပြောရဲလာခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီအလုပ်တုန်းကတော့ အတော်လေး အလုပ်ရှင်ကလည်း အတော်လေး ဆိုးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုလက်ရှိ အလုပ်က ကောင်းတယ်ပြောလို့ ရမယ်။ ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ကျေတယ်၊ အလုပ်တွေ အချိန်မှီပြီးတယ်ဆို ပြဿနာရှာတာမျိုး မရှိသလောက်ကို ရှားပါတယ်။ မနိုင်တာလဲ အတင်း မခိုင်းဘူး။ ဘယ်အရာမဆို ကောင်းတာရှိသလို ဆိုးတာလေးတွေလဲ ရှိတာပေါ့လေ။
မနေ့ ညက စိတ်ညစ်နေတုန်း အားပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲဒီလို နားလည်ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရှိလို့တော်သေးတာပေါ့။ မဟုတ်ရင် မလွယ်ဘူး။ သူတို့ ပြောသလိုပဲ စိတ်အမှတ်ကြီးတယ်ဆိုတာ နေရာတကာ ကောင်းတာ မဟုတ်ပါဘူးလေ။ စိတ်ကို ထားတတ်အောင် ထားပြီးနေမှ ဖြစ်မယ်။ ပြောတာပဲ၊ တကယ်ကြုံလာပြီဆို စိတ်က လျှော့လို့ မရ။ အင်း.. အချိန်လေး ရအောင်ယူပြီး တရားမှတ်တာလေး ပြန်လုပ်အုံးမှ ဖြစ်တော့မယ်။ ခုလိုတွေရေးလို့.. မကြာခင်မှာ လောကီကို စိတ်ကုန်လို့ဘုရားရိပ် တရားရိပ်မှာပဲ မွေ့ ပျော်တော့မယ် ပြောလာမှာ တိတ်တခိုး စိုးရိမ်နေသူများ ရှိနေမလား။ ရှိမယ်တော့ မထင်။ :D တကယ်ကြီးလား.... ပါရမီ ဖြည့်ပါရစေ.. ဘာကူညီရမလဲ .. လိုတာသာပြောပါ ဆိုတဲ့သူတွေ များမှာ...
Posted by Nay Nay Naing at 6/23/2008 06:01:00 PM2comments
Posted by Nay Nay Naing at 6/22/2008 09:18:00 PM2comments
Posted by Nay Nay Naing at 6/21/2008 11:37:00 PM0comments
တီတာတာ ဒုက္ခမိုးတို့ 
Posted by Nay Nay Naing at 6/19/2008 05:26:00 PM0comments
June 19 , 2008 at 1:00 AM in Singapore and June 18, 2008 at 11:30 PM in Myanmar.
မျှော်လိုက်ရတာ .. ခုမှပဲ Firefox3ကို ဒေါင်းလုတ်လုပ် လို့ ရတော့တယ်။ Singapore အချိန်နဲ့ ဆို ၁၈ ရက်နေ့ ၊ မနက်2နာရီ မထိုးခင်လေးမှာ Firefox3ကို ဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့အီးမေးရောက်တယ်။ အခု ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီး အခုပိုစ့်ကို FF3 နဲ့တင်ကြည့်တာ။ တခြားဟာတွေ ဘာကောင်းလဲတော့ မိသိဘူး။ မြန်မာဖွန့် အတွက် ပိုကောင်းလာတာတော့ အမှန်ပဲပေါ့။ ကျွန်မ ကွန်ပြူတာမှာ Blog မှာ post လုပ်ရင် HTML View မှာ ရေးရင် အရင်က မြန်မာလို ကောင်းကောင်းမပေါ်တာ အခု အကုန်အဆင်ပြေ မြင်နေရတယ်။ စာလုံးတွေ ပိုထူလာတယ်။ ကျန်တာတွေတော့ နောက်မှ စမ်းကြည့်တော့မယ်။ အခုတော့ ပြန်အိပ်သင့်ပြီလို့ထင်တယ်။ ကောင်းသော ညပါ။
FireFox3အကြောင်းသိချင်တယ် ဆိုရင်
Watch Firefox3in Action (by Mike Beltzner)
Top 10 Firefox3features (by LifeHacker)
Posted by Nay Nay Naing at 6/18/2008 03:55:00 AM3comments
ပြီးခဲ့တဲ့ လကုန်ပိုင်းက Google Favicon ပြောင်းသွားတာကို သတိထားမိတာနဲ့အဲဒီအကြောင်း Google's New Blue Favicon ရေးခဲ့တယ်။ နောက်ရက် အနည်းငယ်ကြာတော့ Google Blog မှာ တက်လာတဲ့ သတင်း အရ အဲ့ဒီ favicon ဟာ Final မဟုတ်သေးဘူး၊ ထပ်ပြောင်းအုံးမှာ ဖြစ်ကြောင်း သိခဲ့ရတယ်။ ၈ နှစ်ခွဲ အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် favicon ကို ပြောင်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ New Platform (iPhone and Mobiles) တွေမှာ ပိုကောင်းတဲ့ favicon တွေသုံးလိုတဲ့ အတွက်ပြောင်းတာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောထားတယ်။
အဓိက ပြောချင်တာက Google Favicon အတွက် ကိုယ်ပိုင် Design ပုံစံ ထုတ်ထားတာရှိရင် Google ကို ပို့ ပေးလို့ရတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းပါ။ ကျွန်မတို့မြန်မာလူမျိုးတွေထဲက Design ပိုင်းကျွမ်းကျင်သူတွေ စမ်းကြည့် သင့်တယ်လို့ထင်မိတယ်။ ဒါဆို တစ်နေ့ တစ်နေ့လူပေါင်းများစွာ ကြည့်နေမြင်နေရတဲ့ Google Favicon ဟာ မြန်မာ တစ်ယောက် လုပ်ထားတဲ့Design / Idea (Favicon) ဆိုပြီး ပြောလို့ ရ၊ ဂုဏ်ယူလို့ရသွားမှာ။ (ကြွားချင်လို့ ပါ။) စိတ်ဝင်စားတယ်ဆို အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကို Submit your Google favicon idea ဖတ်လို့ရပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 6/16/2008 08:34:00 PM0comments
ဇော်ဝင်းထွဋ် ရဲ့ တမူးသာ ဆိုတဲ့သီချင်းလေးကို Native Music Cornes မှာ သီချင်းလက်ဆောင် အဖြစ် တောင်းပေးခဲ့တဲ့ မမွန် နဲ့သီချင်း စာသားများကို ဒီဇိုင်းလှလှ နဲ့အလှ ဆင်ပေးခဲ့တဲ့ Native DJ ရှင်းမင်းကို အထူးကျေးဇူးတင် ရှိပါတယ်။
ဇော်ဝင်းထွဋ် - တမူးသာ
ဂုဏ်ငွေအရှိန်အ၀ါ နဲ့ စည်းစိမ်တွေ
ဖြည့်လို့ မပြည့်တဲ့ အိုးများ လူသားပဲ
ကိုယ့်အတ္တနဲ့ ကိုယ်စီ် အနဲအကျင်းတော့
ချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့် မင်းနဲ့ ကိုယ်ရူးခဲ့တယ်
ကိုယ်တို့ရိုးရိုးလေးချစ်နေတာ
ဘယ်သူတွေ ထိခိုက်လို့ လဲ
ဟူး.... နာ နာ... နာ..နာ.. နား နား ရေး
ကိုယ်တို့ ရူး အခုထိတော့
Posted by Nay Nay Naing at 6/16/2008 05:13:00 PM0comments
Posted by Nay Nay Naing at 6/16/2008 09:36:00 AM0comments
Posted by Nay Nay Naing at 6/13/2008 03:12:00 PM4comments
မကြာခင်ထွက်တော့မယ့် Firefox3Browser ရဲ့ Features အသစ်တွေ အကြောင်း ရှင်းပြထားတာကို ဖတ်ဖြစ်တယ်။ တစ်ခုချင်းစီတော့ ပြန်မရှင်းတော့ဘူး။ အဲ့ဒီမှာ အတော်လေး စုံစုံလင်လင် ရှင်းပြထားတာတွေ့ ရတယ်။ စိတ်ဝင်စားသူတွေ စမ်းကြည့်လို့ရတာပေါ့။ ဖတ်ကြည့်ဖြစ် သလောက် တွေ့ ရတဲ့ Features တွေက အတော်လေး ကောင်းတယ်။ Firefox3အကြောင်း စိတ်ဝင်စားသူတွေ ဖတ်ချင်တယ်ဆို ဒီမှာ ဖတ်လို့ ရပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 6/13/2008 01:00:00 PM0comments
Firefox3-17 June (Help Firefox setaWorld Record)
ဇော်ဂျီ မြန်မာယူနီကုတ်နဲ့အဆင်ပြေပြီး၊ မြန်မာဘလော့ရေးသူတွေ ဖတ်သူတွေ အဓိက ထားသုံးတဲ့ Firefox Browser ရဲ့ Version3ကို 17 June 2008 ( လာမယ့် အင်္ဂါနေ့ ) မှာ ထွက်မယ်လို့သိရပါတယ်။ Firefox Website မှာ ကြော်ငြာထားတဲ့ Firefox3အတွက် Mission က ကမ္ဘာပေါ်မှာ 24 နာရီအတွင်း အများဆုံး ဒေါင်းလုပ်လုပ်တဲ့ Software (Guinness World Record for the most software downloaded in 24 hours!) ဖြစ်အောင် လုပ်မှာ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ကျွန်မတို့အတွက် အသုံးအတည့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Firefox Browser ရဲ့ Mission အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရေးအတွက် ကူညီချင်ပြီး၊ Download Day မှာ ဒေါင်းလုတ်လုပ် ချင်တယ်ဆို ဒီအောက် ပုံလေးကို Click လုပ်လိုက်ပါ။
Firefox3release date - 17 June 2008
Firefox3mission - to setaGuinness World Record for the most software downloaded in 24 hours!
ကိုယ့်ရဲ့ Website တွေ၊ Blog တွေမှာ ဒီလို အထက်က ပုံမျိုးလေးတွေ ယူပြီး ကြော်ငြာပေးချင်တယ် ဆိုရင် Get Involved မှာ ရယူနိုင်ပါတယ်။
Firefox3ကို 34 months ကျော်ကြာအောင်၊ ပါဝင်သူ ၁ သောင်းကျော်နဲ့develope လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ လဲ သိရတယ်။ အခုထွက် Firefox3က ဘယ်လောက် ကောင်းမလဲတော့ မသိဘူး၊ Beta Version လည်း စမ်းမသုံးကြည့်ဖူးဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Firefox3ရဲ့ Mission အောင်မြင်အောင် အဲ့ဒီနေ့ မှာ Firefox3ကို Download လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း စာရင်းပေးထား လိုက်တယ်။ ",)
Posted by Nay Nay Naing at 6/12/2008 05:44:00 PM2comments
If it'samillion milesaway or justamile up the road
Who Says You Can't Go Home - Bon Jovi (f. Jennifer Nettles of Sugarland)
Who Says You Can't Go Home - UploadaDocument to Scribd
Read this document on Scribd: Who Says You Can't Go Home
Watch official music vedios ...
Who Says You Can't Go Home - Bon Jovi and Sugarland (last.fm)
Who Says You Can't Go Home - Bon Jovi (last.fm)
Who Says You Can't Go Home (wiki)
Source of Home Sweet Home Painting
Posted by Nay Nay Naing at 6/12/2008 03:01:00 PM0comments
ဒီနေ့အလုပ်မှာ သိပ်ပြဿနာ မတတ်ဘူး။ ဒီတစ်ပတ် တနင်္လာ နဲ့အင်္ဂါ မှာ အရမ်း အလုပ်ရှုပ်တယ်။ အဲဒီနှစ်ရက်ကဆို အလုပ်ရောက်ကတည်းက ရှင်းလိုက်ရတဲ့ အီးမေးတွေ၊ ဖြေလိုက်ရတဲ့ ဖုန်းတွေ ညနေ ၆ နာရီ အထိ မရပ်မနားပါပဲ။ လက်ကို စက်တပ်သလို လုပ်နေရတယ်။ ဒီနေ့အလုပ် နည်းနည်းရှုပ်ပေးမယ် Manage လုပ်နိုင်တဲ့ Level မှာရှိတယ်။ အချိန်ရတာနဲ့နေ့ လည် ၂ နာရီကနေ ၄ နာရီ ခွဲ အထိ Knowledge Sharing Session တစ်ခုသွား သွားတတ် ဖြစ်လိုက်သေးတယ်။ ပြန်လာတော့ အီးမေးတချို့ ပြန်ပြီး လုပ်စရာ မရှိတော့လို့အိမ်ပြန်မယ့် အချိန်စောင့်ရင်း နေးတစ်ဖိုရမ်မှာ KalvinAlexander အသစ် တင်ထားတဲ့ Personality Test for Programmer Topic က Test ကို ဖြေကြည့် ဖြစ်တယ်။ အချိန်လည်း ရတယ်၊ စိတ်ဝင်စားတယ် ဆိုရင် စမ်းကြည့်နိုင်အောင် ကယ်ဗင် တင်ပေးထားတဲ့ လင့်ကို ပြန်မျှလိုက် ပါတယ်။
Programmer Personality Test - Doolwind.com
အဖြေရွေးရာမှာ ဘာက ပိုကောင်းတယ်၊ ဘာကို ဖြေသင့်တယ် ဆိုပြီး မရွေးပဲ ကိုယ်လုပ်မယ့်ဟာကို သာရွေးဖြေသင့်တယ် ပြောထားတယ်။ ကျွန်မ ဖြေကြည့်လိုက်တော့ PLTC လို့ထွက်လာတယ်။ တချို့ မေးခွန်းတချို့ အတွက် ပေးထားတဲ့ အဖြေနှစ်မျိုးမှာ တကယ်အပြင်မှာ ကျွန်မ လုပ်မယ့်ပုံစံ မပါတာတွေ ရှိတယ်။ နှစ်ခုထဲက တစ်ခု ရွေးရမယ်ဆို ဘာလုပ်မယ် တွေးပြီး ရွေးလိုက်တယ်။ နောက်ဆုံး ထွက်လာတဲ့ အဖြေမှာ ရတဲ့တဲ့ ပုံစံက အပြင်က ကျွန်မ ပုံစံနဲ့တူမတူတော့ မပြောတတ်ဘူး။ ကျွန်မ အကြောင်း ကောင်းကောင်းသိသူ တချို့ ကတော့ ကျွန်မဟာ အဲဒီလိုပုံစံ ဟုတ်မဟုတ်ကို ပြောနိုင်မယ် ထင်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဦးနှောက်စားတဲ့ အမေးအဖြေတွေ မဟုတ်တော့ ဖြေကြည့်ရတာ သဘောကျပါတယ်။ မှန်တာ မှားတာ အသာထား ဖြေကြည့်ရတာ အပျင်းပြေတယ်။
Your programmer personality type is: PLTC
Credit to KalvinAlexander
Posted by Nay Nay Naing at 6/11/2008 06:19:00 PM3comments
Posted by Nay Nay Naing at 6/10/2008 11:07:00 PM5comments
$199 for 8G and $299 for the 16GB model.
Plus you can't buy it online or activate it yourself.
3G iPhone Features
3G iPhone -Photo Galleries
၁၁ ဂျူလိုင် ၂၀၀၈ မှာ 3G iPhone ကို နိုင်ငံပေါင်း ၂၂ နိုင်ငံမှာ ၀ယ်လို့ ရမယ်လို့သိရတယ်။ အဲ့ဒီ ၂၂ နိုင်ငံမှာ စင်္ကာပူနိုင်ငံ မပါသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီနှစ် နှောင်းပိုင်းမှ 3G iPhone သုံးလို့ ရမယ့် ၄၈ နိုင်ငံတွေမှာတော့ စင်္ကာပူ ပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 6/10/2008 08:06:00 AM0comments
Posted by Nay Nay Naing at 6/09/2008 01:58:00 PM4comments
ဒီနေ့သောကြာနေ့ ။
တစ်ပတ် ၇ ရက်ထဲ ဘယ်နေ့ တွေကို ကြိုက်သလဲ မေးလာမယ်ဆို အခုနောက်ပိုင်း အရင်လို အလုပ်ပိတ်ရက်ကို ကြိုက်တာ မဟုတ်ပဲ ကြာသာပတေး နဲ့သောကြာနေ့ တွေကို ပိုသဘောကျနေတယ်လို့ဖြေမယ်။ ကြာသာပတေးနေ့မနက် ရောက်ပြီဆို ... မနက်ဖြန် သောကြာ.. အလုပ်လုပ်ရမယ့် ရက်တွေ တစ်ဝက်ကျော် ကုန်သွားပြီလို့ တွေးပြီး စိတ်ချမ်းသာတယ်။ သောကြာနေ့ ဆိုလဲ ဒီနေ့ဒီတစ်ပတ်အတွက် နောက်ဆုံး အလုပ်လုပ် လုပ်ရမယ့် နေ့ ဆိုပြီး စိတ်ကြည်လင် နေတယ်။ အဲ... သောကြာနေ ညနေပိုင်း ရောက်ပြီ ဆိုရင်တော့ အရင်လို အရမ်း စိတ်လက် ပေါ့ပါးတယ် ဆိုတာမျိုး မခံစားရဘူး။ ခုနောက်ပိုင်း စနေ၊ တနင်္ဂနွေရက်တွေဟာ အလုပ်မသွားရလို့အိမ်မှာနေရတာကလွဲရင် ဘာမှ နှစ်သက်စရာ မရှိဘူး။ ဟိုရှုပ် ဒီရှုပ်၊ ဟိုကိစ္စ ဒီကိစ္စတွေ များပြီး စိတ်အဆင်မပြေမှု့ တွေနဲ့ ပဲ ကြုံတွေ့ နေရတာများနေတယ်။ ဒီအားလပ်ရက်မှာ စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စရာ ဘာတွေများ ထပ်ကြုံရအုံးမလဲ တွေးပြီး စိတ်ထဲသိပ်မကြည်ဘူး။ Weekend ရောက်မှာတောင် လန့် နေတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်ဆုံးတော့ အားလုံး အဆင်ပြေသွားမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ အားတင်း ရတာပေါ့။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မှ အားမပေး၊ ဘယ်သူလာ အားပေးမလဲ။
Keepasmile on your face, no matter what!..
ပြုံးတော့ ပြုံးနေပါရဲ့ ကိုယ်မျက်နှာပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့ အပြုံးဟာ အများပြောတဲ့ မချိပြုံး ဆိုတာမျိုး မဖြစ်ဖို့ လည်း လိုမယ်။
People are just about as happy as they make up their minds to be. ~ Abraham Lincoln
Posted by Nay Nay Naing at 6/06/2008 06:10:00 PM0comments
Posted by Nay Nay Naing at 6/06/2008 11:33:00 AM 13 comments
03-June-2008 He bought this present at 26th May 2008 and I got it at 3rd June 2008. :-)
ဒီတစ်ခါက ပါဆယ်နဲ့ ပို့ တာ မဟုတ်ပဲ လူကြုံနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ လက်ဆောင်။
ဟိုးအရင် လက်ဆောင်တွေ ရရင် လက်ခံရရှိတဲ့ နေ့ တွေကိုပဲ မှတ်ထားလေ့ရှိပြီး၊ ဘာတွေပါတယ်၊ ဘာတွေရတယ် ဆိုတာ မှတ်ထား၊ ရေးထားလေ့ မရှိဘူး။ အခု ဒီအိတ်လေးကို လက်ခံရရှိတဲ့နေ့ က အရင်အခါတွေမှာ ရခဲ့တဲ့ လက်ဆောင်တွေ အကြောင်း ပြန်ပြီး စဉ်းစားကြည့်တော့ အဲ့ဒီအချိန်တွေက ပါဆယ်ထုတ်ထဲမှာ ပါလာတဲ့ ပစ္စည်းစာရင်းတွေကို အတိအကျ မမှတ်မိတော့ဘူး။ ပို့ မယ်ဆိုပြီး အသေအချာ ပြောထားတဲ့ အရာဝထ္ထုတွေကို မှတ်မိပေမယ့် တခြားပါလာတဲ့ ပစ္စည်း သေးသေးလေးတွေကို သေချာ စဉ်းစားမရတော့တာပါ။ လက်ဆောင်ကို ဘာအတွက်ဆိုပြီး သီးသန့် ပေးတာမဟုတ်ပဲ အဆင်ပြေတယ် ထင်တာလေးတွေရှိရင် ၀ယ်ထည့်ပေးလိုက်တာမျိုး။ ပစ္စည်းဆိုတာမျိုးက သုံးလိုက်ရင် ဟောင်းနွမ်းပြီး နောက်ဆုံး ဘယ်ပျောက်သွားမှန်မသိ ဖြစ်တတ်တယ်။ မပျက်ဆီးအောင် မသုံးပဲ ဒီအတိုင်း သိမ်းထားလို့ လဲ မဖြစ်ဘူး။ သုံးစေချင်လို့ဝယ်ပေးတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို သုံးမှပဲ ပေးသူတွေက ကျေနပ်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဟိုးနှစ်ဆန်းပိုင်းက ပို့ တဲ့ အထဲမှာ ပါတဲ့ ပစ္စည်းတချို့ ဆို သုံးလို့ဟောင်းတာဟောင်း၊ ပျက်တာ ပျက်၊ ကုန်တာကုန် ဖြစ်ကုန်ပြီ။ အမှတ်တရလည်းဖြစ်အောင် (အဓိကက ကိုယ်မေ့တာ လူမသိအောင် :D) နောက်ဆို လက်ဆောင်တွေရရင် ဘာတွေရလဲဆိုတဲ့ စာရင်းနဲ့့ အဆင်ပြေတယ်ဆို ပုံလေးတွေနဲ့ ပါ ဒီမှာ မှတ်ထားမယ် စိတ်ကူးတယ်။ ဒီနေရာက ကျွန်မ ရေးချင်တာတွေကို Diary သဘောမျိုး ရေးတဲ့ နေရာဖြစ်တော့ ဘယ်သူ့ အတွက်မှလဲ အနှောက်အယှက်ဖြစ်မယ် မထင်ပါဘူး။ ဒီလက်ဆောင်ကို သယ်လာပေးတဲ့ မမကြီး (Ma WNNW) ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ :-) ဒီအိတ်သွားယူတဲ့ နေ့ က မမကြီးက အင်္ကျီတစ်ထည် နဲ့ချောကလက်ပါပေးလို့တစ်နေ့ တည်း ပစ္စည်း ၃မျိုး လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ လက်ဆောင်ရတဲ့ အိတ်က ကျွန်မ အမြဲသုံးလေ့ရှိတဲ့ အညိုရောင် ဖြစ်သလို၊ လက်ဆောင်ရတဲ့ အင်္ကျီကလဲ ကျွန်မ ၀တ်လေ့ရှိတဲ့ ပန်းရောင်။
Posted by Nay Nay Naing at 6/05/2008 10:45:00 AM5comments
ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေ၊ လုပ်ချင်တာတွေမှာ ဘယ်အရာတွေက ဖြစ်နိုင်သလဲ၊ ဘယ်အရာတွေက မဖြစ်နိုင်ဘူးလဲ၊ ဘာတွေကို လုပ်သင့်သလဲ၊ ဘာတွေကို လုပ်သင့်ဘူးလဲ ဆိုတာ သေချာထပ်စဉ်းစားတယ်။
လုပ်သင့်တဲ့၊ လုပ်ရမယ့်ဟာတွေမှာ ဘယ်ဟာက ဦးစားပေးလဲ၊ ခုချိန်မှာ ဘာလုပ်နိုင်သလဲ စဉ်းစားပြီး၊ လုပ်နိုင်သမျှကို အချိန်မဆွဲပဲ ပြီးအောင် လုပ်တယ်။
လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်နေပြီး၊ လုပ်သင့်တာတွေ မလုပ်ဖြစ်လိုက်လို့စိတ်ညစ်ရတဲ့ အခြေအနေမျိုး မဖြစ်ချင်သလို၊ ကိုယ်မလုပ်နိုင်တာတွေ အတွက် စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်နေတာမျိုးလည်း အဖြစ်မခံဘူး။ မလိုအပ်တဲ့ အပိုအလုပ်တွေ၊ ဘယ်သူ့ ဘယ်သူ အတွက်မှ အကျိုးမရှိတာမျိုးတွေ အတွက် အချိန် အကုန်မခံဘူး။
အစားအသောက်ကို အချိန်မှန် စားဖြစ်တယ်။ မနက်စာ၊ နေ့ လယ်စာ နဲ့ညစာ ၃ ကြိမ် စားဖြစ်အောင် စားတယ်။
အလုပ်ချိန်မှာ အလုပ်သွားပြီး စိတ်အေးအေးနဲ့လုပ်စရာရှိတဲ့ အလုပ်တွေ ပြီးအောင်လုပ်တယ်။
အလုပ်ချိန်ပြီးလို့တခြားကိစ္စနဲ့အပြင်သွားဖို့ ရှိရင် ဆက်သွားတယ်၊ မရှိဘူးဆို အိမ်စောစော ပြန်လာတယ်။
အချိန်မှန် အိပ်ပျော်အောင် အိပ်တယ်။ စိတ်အနှောက်အယှက် သိပ်မရှိတော့ အိပ်ရေး၀၀ အိပ်ဖြစ်နေတယ်။
တစ်ခုပဲရှိတယ် ညဖက် စောစောအိပ်ပေမယ့် အရင်လို မနက် စောစော မထဖြစ်ဘူး။ နောက်ဆုံး အိပ်လို့ ရတဲ့ အချိန်အထိ အိပ်ဖြစ်နေတယ်။
အရင်ကထက်ပိုပြီး လိမ္မာနေတယ်လို့ပြောလို့ ရမယ် ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် စာဖတ်ချင်စိတ်မရှိတာကို ရှိအောင် ပြန်လုပ်ဖို့ နဲ့စောစောအိပ်ရာ ထတဲ့ အကျင့်လေး ပြန်မွေးဖို့ တော့ လိုနေသေးတယ်။ ဒီအတိုင်းဆို တခြားဟာတွေ မသိသာတောင် အစားမှန်၊ အအိပ်မှန် ဖြစ်နေတာကြောင့် နည်းနည်းလောက်တော့ ၀ လာမယ် မျှော်လင့်ရတယ်။ အင်း.. တသက်လုံး ကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေကို အရင်လုပ်၊ လုပ်သင့်တာကို မလုပ်မဖြစ် နောက်ဆုံး အချိန်မျိုးမှ လုပ်ပြီး ပေပေတေတေ နေတတ်တော့ ဒီလို အစားအသောက် အအိပ် မှန်မှန်နဲ့လုပ်စရာရှိတာတွေ အချိန်မဆွဲပဲ ပြီးအောင်လုပ်ပြီး လိမ္မာနေတာမျိုး ဘယ်လောက်ကြာကြာ နေဖြစ်မလဲ မသိဘူး။
Posted by Nay Nay Naing at 6/04/2008 04:38:00 PM2comments
အားလပ်ရက်မှာ အပြင်မထွက်ဖြစ်ပဲ အခန်းတွင်းအောင်းတာ များသွားလို့မအီမသာဖြစ်နေတာ ပျောက်အောင်အောင် Kitty For Me မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Let's do exercise! လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေ လုပ်ကြည့်ရင် ကောင်းမလား စဉ်းစားနေမိတယ်။ သောကြာနေ့အလုပ်လုပ်ရတာ အရမ်းပင်ပန်းသွားတဲ့ အချိန် ထဲက ဒီလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်နည်းလေးတွေ ရှိတယ်ဆိုတာကို သတိရသွား ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် ထုံးစံအတိုင်း လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တယ်ဆိုတာ ပင်ပန်းတယ်၊ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့အရာလို့ထင်နေတော့ နည်းတွေ သွားကူးယူဖို့မေ့သွားတယ်။ ဒီနေ့ညောင်းညာသလိုလို ခံစားရမှ ပြန်သတိရသွားတော့တယ်။ စိတ်ဝင်စားသူတွေ လေ့ကျင့်နိုင်အောင် ကူးယူ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
သက်ရှည် ကျန်းမာချင်တဲ့ သူတွေဟာ ဒီလို ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု့ လေးတွေကို အမြဲလုပ်ဖို့လိုမယ်ထင်တယ်။
Credit to Kitty-for-me
Posted by Nay Nay Naing at 6/01/2008 10:31:00 PM4comments